पश्चिम बागलुङका जनप्रतिधि र जनप्रतिनिधि संस्थालाई पाँच सुझाव - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ ५, बुधबार १०:०४
पश्चिम बागलुङका ४ पालिकाको भरपर्दो स्वास्थ्य उपचार स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो । भौतिक संरचनाका हिसावले होस् वा जनशक्तिका हिसावले सबैको आसा र भरोसाको केन्द्र यसलाई मानिएको छ ।
राज्यतहबाट गरिनुपर्ने व्यवस्थापकीय कमजोरी, स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर सवालमा समयमा नपुगेको ध्यान र यसलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनुपर्ने, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका क्रियाशीलतामा देखिएका त्रुटिले, यसलाई रिफर सेन्टरका रुपमा जनताले बुझ्ने गरेका छन् । त्यसो हुनुहुँदैन भन्ने सुझाव छ ।
कोरोना संक्रमितलाई बचाऔं:
कमीकमजोरीहरु जो जस्का भए, त्यसलाई आजैबाट सच्याउँदै जाऔं । मानवीय स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा एकमत हुन जानौं । पहिला आफु बाँचे र अरुलाई बचाउने मानवीय प्रणमा जिम्मेवार भयौं भने, झगडा गर्दै गरौंला । बातचीत, बहश, न्यायोचित प्रतिस्पर्धा, तेरो—मेरो र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको राजनीति पनि गरौंला । त्यसकालागि पहिला जनता बचाउने दायित्व पूरा गरौं । कोरोना संक्रमणको महामारीले संसार जगडेको अवस्थामा, आफ्नो तवरबाट स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमी हुनुहुँदैन । स्वास्थ्यकर्मी अभाव हो भने, आवश्यक प्रवन्ध गर्न नचुकौं । स्वास्थ्य सामाग्रीको समस्या हो भने, त्यसको प्रवन्ध गरिहालौं । देशभर अक्सिजन नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेको परिवेश, महंगा भनिएका अस्पतालहरुमा समेत विरामीले बेड नपाएर मरिरहेको खबर थाहा पाइराखेको समयमा अव विवेक प्रयोग गरेनौं भने हामी को हौं किन यो पदमा उक्लेका हौं । पहिला आफैले आफैलाई सोधौं र जवाफ तयार पारौं । अहिले, स्थानीय स्तरमा समेत कोरोना संक्रमितहरु छ्यापछ्याप्ती भइरहेको, विरामी भएर आ—आफै रिफर भएरहेको थाहा हुँदाहुँदै उनीहरुलाई यहाँबाट बाटो कटाएर मृत्युको मुखमा रिफर गर्ने अवस्थाको सिर्जना तपाइहरुबाट नहोस् र नगरौं । त्यसका लागि केही सम्भावित क्रियाकलापहरुमा विवेक पुरयाइयोस् ।
१) तत्काल यहाँका ४ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले, बुर्तिबाङको भौतिक संरचना उपयुक्त भएको स्वास्थ्य केन्द्र भवनमा कोरोना उपचार सेन्टर स्थापनामा जोड दिइयोस् । तपाइहरुका मनमा भएका तेरो मेरो वा त्यो यो ठाउँ विषेश भनेर संकटमा बेकारका बातचित छाडौं र तत्काल कार्यमा लागौं । एकमतले यहाँको भौतिक संरचना अनुसारको कोभिड उपचार सेन्टर स्थापना भएको सन्देश यहाँका स्थानाीय पालिका प्रतिनिधिहरुबाट नागरिककाबीचमा प्रवाह होस् । आवश्यक योजना तत्काल निर्माण गरि सघन कक्ष निर्माणको व्यवस्था गरियोस् । जहाँ कम्तिमा १ सय जना कोरोना विरामीको उपचार कक्ष, भरपर्दो अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने प्रयत्न सुरु होस् ।
२) आवश्यक जनशत्तिका लागि सबै पालिकाले जिम्मेवारी बहन गर्नेगरि स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रायप्त व्यवस्था गरियोस् । महामारीका समयमा आफ्नो मातहतमा रहेका बजेटलाई नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र कोरोना उपचारमा खर्च गर्नेगरि सहमति गराइयोस् । नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा राजनैतिक विचार, नीति, शिद्धान्तका कुरा गरिने होइन । त्यो आदर्शका रुपमा नेतृत्व क्रियाशील भएर वर्तमान समस्याको हलगर्ने तर्फ दिलोज्यान लगाइएको हेर्न पाइयोस् ।
३) महामारीमा भौतिक विकास रोकौं । नागरिक नै नरहे, तपाइले बनाउने बाटो कस्का लागि ? पुल, पुलेसा, मठ, मन्दिर, भवन केका लागि ? पहिला नागरिक चाहियो, उनीहरुको जीवन चाहियो, स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युहुनबाट बच्ने व्यवस्था र प्रवन्ध चाहियो । त्यसकालागि सही समयमा सही निर्णय गरियोस् । पालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरियोस् । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको आत्मरक्षा, भौतिक शरिको रक्षा र मनोवल उच्च बनाएर कर्ममा खड्ने व्यवस्थामा कन्जुस्याईं नहोस् ।
४) कुशल राज्य व्यवस्थापकको परिचय र कर्म देखाउने समय पनि यही हो । नागरिकाको सबैभन्दा चासो र संवेदनशीलता स्वास्थ्यमा हुन्छ । यस्तो संवेदनशीलता बुझेर उनीहरुको दुखाईमा मलमपट्टी लगाउनु महाकर्म हो । महामारीमा जीवनको सारथी बन्न सक्नुहुने राज्य व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिहरुको आफ्ना सामाजिक जीवनको उदाहरणीय परिचय समाजमा स्थापित हुने समयपनि यही बन्दछ । चूनौंति तमाम होलान् तर चूनौतिको सही समयमा सामना गर्ने निर्णय शक्ति, जनभावनको उच्चतम कदर हुने परिणाममूखी परिवेश घरीघरी आउँदैन । अरुबेला अरुनै प्रतिस्पर्धा गरिएपनि यहाँ जनताको ज्यान बचाउने कस्तो गतिलो प्रतिस्पर्धा छ, जहाँ हर समय जितिन्छ । हार भन्ने कहीं छैन । अघिपछि दलहरुसँग राजनीति गर्नुभयो । यसवेला स्वकर्ममा जीवनलाई जनउत्तरदायी बनाएर प्रतिस्पर्धी विनाको सत्कर्मको राजनीति गर्नुस् । जनताको ज्यान बचाउने राजनीतिमा विरोधी पनि हुँदैनन् ।
५) राजनैतिक हिसावले पर वसेका, औंलो देखाएका, देख, पख भनेका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुलाई अझ पर बनाएर राख्ने कार्य तपाइहरुको कर्म क्रियाहरु निष्कृय बनेर हुनसक्छ । जनप्रतिनिधि संस्था निष्कृय भएको राज्य व्यवस्था जनता र समाजका लागि घातक हुन्छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । सही काम गर्दा, समाज, जनता, विपक्षी भनिएका पार्टि, तिनका नेता आफै आकर्षित हुन्छन् । भूमिकाविहिन बनेर बस्ने समयपनि होईन् । त्यसो नगरियोस् ।
जनता कसैका होईनन् र हुँदैनन् । राज्य व्यवस्थामा कुनै राजनीति, त्यसका प्रतिनिधि र पात्रहरु उक्लिन्छन् झर्छन् । यो सामान्य नियम हो । तर संकटमा ज्यूज्यानको सुरक्षा नागरिकका लागि तपाइहरुले नै बनाएको संबैधानिक हक र अधिकार हो । जनस्वास्थ्यमा परिरहेको संकट व्यवस्थापन गर्न नजान्ने, यस्तोमा फरक ढंगले राजनैतिक स्वभाव देखाउने, विरोधी र प्रतिहोधी बन्ने, मैमत्ता भएर गैह्र जिम्मेवार बन्ने यो अधर्म हो । त्यतातिर जनताका प्रिय जनप्रतिनिधिहरु जानुहुने छैन । जनभावकोको कदर, आदर सत्कार गर्न जान्नुभएका जनप्रतिनिधि र त्यसको बहालवाला कुर्सीका बस्नुभएका जनसासकहरु, जनसेवीभएर चम्कने वातावरण बनाउनुस् । जनसेवामा त्याग र समर्पण सहित लाग्नुस् । पश्चिम बागलुङका जनताको जनस्वास्थ्य रक्षक बनेर उदाहरणीय रुपमा पेश हुनुहोस् । हामी जनता सधै तपाईहरुको सत्कर्मको पक्षधर भइरहन पाइयोस् ।